Ndị na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze | Agencylọ Ọrụ PR & Ahịa | TOC Mmekọrịta Ọha
TOC na-egosi pọdkastị
San Joaquin County Sheriff nke Officelọ Ọrụ
Onye Na-anabata Ahụ Nke Mbụ
LLP ọla ọcha & Wright
Ngalaba ndị uwe ojii Rialto
Onye nlekọta Curt Hagman
Ndewo, Anyị bụ TOC Public Relations
Anyị na-enye mmekọrịta ọha na eze, ahịa dijitalụ, na usoro nkwukọrịta nkwukọrịta yana nsonaazụ pụtara.
Ka anyị TOC
Ndị na-ewu ewu ụlọ & Akụkọ akụkọ
N’etiti ọha mmadụ nke oge a, iwulite ntụkwasị obi ọha na inwete ihe onyonyo ọkachamara bụ otu n’ime ọrụ gị kacha mkpa. Ọbụghị naanị na izipu ozi na izizi ozi dị oke mkpa iji mee nke ahụ, mana ọ ghọrọ atụmanya. Ekwela ka ndị ọzọ mepụta aha gị ma kọọrọ gị akụkọ gị.
Usoro ntinye aka site na blọọgụ, akwụkwọ akụkọ, ihe eserese, na ọrụ foto / vidiyo ọkachamara.
Zụlite onyonyo nke na-emetụta ndị mmadụ mgbe ha hụrụ akara njirimara ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ gị.
Unlọ ọrụ pụrụ iche, ọkachamara na ebe nrụọrụ weebụ bụ ngwa ahịa ahịa dị irè na ọnụ ụzọ ámá ndị ahịa nwere.
Kedu ka anyị nwere ike isi nyere gị aka
Anyị anaghị eme isi
Y’oburu na ichoro onodu obula, nke diri gi nma na igho ahia gi na ahia gi, yabụ anyi adighi nma. Na TOC Public Relations, anyị ghọtara na ọ bụghị nzukọ ọ bụla bụ otu, yabụ atụmatụ ịre ahịa gị agaghị abụkwa. Ndi otu anyi mara maka igbalite oke ma mebie iwu. Ọ bụrụ na nke a anaghị atụ gị ụjọ, hapụ TOC.
Ọtụtụ afọ nke Ahụmịhe Jikọtara
Usoro 4 anyị chọrọ
A na-enyocha ma nyochaa ndị ahịa ọ bụla iji mepụta usoro a kapịrị ọnụ iji kwado mkpa ha.
Mepụta atụmatụ nke na-akọwapụta ebumnuche na usoro iheomume nke usoro ahịa ahịa dijitalụ nke onye ahịa.
Mmezu nke Strategy
Nke a bụ ebe anyị na-etinye usoro nkwukọrịta gị na usoro ịzụ ahịa dijitalụ.
Anyị ga-enyocha ọganihu na nsonaazụ nke usoro gị iji hụ na anyị na-ezute ebumnuche anyị.
Anyị bụ ndị a zuru ọrụ ọha mmekọrịta, dijitalụ ahịa, na usoro nkwukọrịta ike. Anyị nwere ihe karịrị 100 afọ nke jikọtara ahụmịhe na akụkụ dị iche iche nke mmekọrịta ọha na eze, na-adụ ndị ahịa anyị ọdụ na-adabere na ihe ọmụma na nghọta mbụ. Anyị na-enweta ihe ọmụma miri emi banyere ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị ma jiri aka ha wee mejuputa atụmatụ ahịa ha. Ọ dị ka ịnwe ndị otu ụlọ ụlọ nke gị.
Nweta ihe kachasị ọhụrụ site na TOC Public Relations
Debanyere aha maka akwụkwọ akụkọ anyị? Anyị kwere gị nkwa na ị gaghị akwa ụta.
Daalụ maka ịdenye aha!
Chief Mark Kling, Ngalaba ndị uwe ojii Rialto
Na-arụ ọrụ na mmekọrịta ọha na eze TOC iji gbanwee nkwukọrịta anyị na onyonyo dị ịtụnanya n'ezie. N'ihi na ndị omebe iwu Tamrin, ọ ghọtara ihe anyị kwesịrị iji mezuo ebumnuche anyị.
Attorney Tristan Pelayes, Lawlọ Ọrụ Iwu nke Pelayes & Yu
N'ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze, TOC PR bụ aka kachasị mma. Site na mkpọsa akụkọ gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi na ogbako ogbako, ha maara otu esi eme ka ị nwee mmetụta dị mma.
Alex Weinberger, Onye Nwe Azụmaahịa
M hụrụ n'anya na m nwere ike ịgwa TOC Public Relations ọhụụ m maka azụmahịa m na ha maara kpọmkwem ihe ha ga-eme iji mezuo ya n'enweghị ntụpọ. Ha na-elekọta ahịa m na akara m ka m wee lekwasị anya na ndị ahịa m.
Nweta Usoro Mgbasa Ozi Gị na Ọnọdụ
Anyị Dị Njikere Ijere Gị Ozi
Hụ ndị otu niile
Onye nwe ya na onye isi ya
Onye Okike web
Na-eduzi Onye Okike Ọdịnaya
Nancy Estevez kwuru
Mmekọrịta onye ahịa
Mepụta njirimara anya gị site na ika site n'ịgbaso ndụmọdụ ise ndị a
TOC Mmekọrịta Ọha|Sep 11, 2021| Ahịa Azụmaahịa, General Ahịa
Atụmatụ ika bụ otu akụkụ kachasị mkpa maka iwulite na idobe azụmaahịa na -aga nke ọma. Site na ...
Ndị a bụ awa na ụbọchị izu iji zere ikenye na Instagram
TOC Mmekọrịta Ọha|Aug 31, 2021| Social Media Marketing
Ọkachamara ọkachamara na ndị na -elekọta mmadụ mgbasa ozi, gee ntị! Dịka ndị ọkachamara n'ọhịa, anyị niile ghọtara mkpa ọ dị ...
Isi uru ise nke LinkedIn maka azụmaahịa, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ
TOC Mmekọrịta Ọha|Jul 26, 2021| Marketing, Social Media Marketing
Enwere ọtụtụ elele na profaịlụ LinkedIn nwere ike inye azụmaahịa, otu n'ime ha na-ewusi ntụkwasị obi nke ...
Hụ edemede niile
Ndị mmekọ a họọrọ
Ngalaba Ọha na Nzụ ahịa Ọha
Ugwu Chino, CA 91709
Iwu mmanye Social
Nọgidenụ na-eme ihe
Relations 2021 TOC Mmekọrịta Ọha. Ikike niile echekwabara.
Weebụsaịtị Kwadoro Site Na TOC Mmekọrịta Ọha
sonye listi nzipu ozi anyi
Nweta akụkọ na mmelite kachasị ọhụrụ site na otu anyị na igbe mbata gị!
Ndi anyi bu
Kpoo ndi otu anyi
San Joaquin County Sheriff nke Officelọ Ọrụ
Onye Na-anabata Ahụ Nke Mbụ
LLP ọla ọcha & Wright
Ngalaba ndị uwe ojii Rialto
Onye nlekọta Curt Hagman